ओछ्यानको खुट्टा सजाउँदै - म कुन फर्निचर राख्न सक्छु? | बेजिया
ओछ्यानको खुट्टा कसरी सजाउन सक्छु
सुसाना Godoy | 06/01/2022 14:00 | फर्नीचर
ओछ्यानको खुट्टा सजाउनुहोस् यो अर्को उत्कृष्ट विकल्प हो जुन हामीले खातामा लिनुपर्छ। किनकि सबै फर्निचर र विवरणहरू मान्य भए तापनि, कहिलेकाहीँ हामी एउटा विशेष ठाउँ बिर्सन सक्छौं जसले हामीलाई हाम्रो कोठा व्यवस्थित गर्न धेरै मद्दत गर्न सक्छ।
त्यहाँ धेरै विचारहरू छन् जुन हामीले खातामा लिनुपर्छ, पछि तिनीहरू सधैं तपाइँको स्वाद वा तपाइँको विशेष बेडरूम को शैली मा आधारित हुनेछ। यो हुन सक्छ, यदि तपाइँ एक पूर्ण, अधिक मौलिक सजावटको मजा लिन चाहानुहुन्छ जसले तपाइँलाई भण्डारण गर्न अनुमति दिन्छ, त्यसपछि निम्नलाई नबिर्सनुहोस्।
1 ट्रंकको साथ फुटबोर्ड सजाउनुहोस्
2 सोफा राख्नुहोस्
3 ओछ्यानमा एउटा किताब पसल
4 बैंक छान्नुहोस्
5 दुई स्टूल मा शर्त
ट्रंकको साथ फुटबोर्ड सजाउनुहोस्
यो पहिलो विचारहरू मध्ये एक हो जुन दिमागमा आउँछ जब हामी फुटबोर्ड सजावट गर्ने बारे सोच्दछौं। सत्य यो हो कि यसको लागि धन्यवाद, हामीले भन्नु पर्छ कि उनको उपस्थिति धेरै परिवर्तन भएको छ। यद्यपि अझै पनि शयनकक्षको यस क्षेत्रको लागि त्यहाँ धेरै पुरानो मोडेलहरू छन्, तपाईं थप आयताकार आकारहरूसँग अन्य फिनिशहरू पनि छनौट गर्न सक्नुहुन्छ। र न्यूनतम प्रकार विकर वा बेज टोनमा, उदाहरणका लागि। जे होस्, हामी के कुरामा स्पष्ट छौं कि तिनीहरूले हामीलाई भण्डारणमा मद्दत गर्छन् र आवश्यक भएमा हामी पानादेखि पजामासम्म सबै कुरा भण्डारण गर्न सक्छौं।
हामी सबैलाई थाहा छ, सोफाका प्रकारहरू सबैभन्दा विविध छन्। त्यसकारण, पक्कै पनि त्यहाँ एउटा छ जुन बेडरूमको यस क्षेत्रको लागि उपयुक्त हुनेछ। यस क्षेत्रको लागि तपाईले ब्याकरेस्ट भएको एउटा छनौट गर्न सक्नुहुन्छ, जुन धेरै अग्लो छैन र दुईवटा सिट भएको छ। यद्यपि दिवान शैलीका पनि धेरै देखिन्छन् । तिनीहरू साँघुरो र कम्तिमा पनि रिचार्ज नगरी फुटबोर्ड सजाउनको लागि उत्तम छन्।
ओछ्यानमा एउटा किताब पसल
त्यसैगरी तपाईं पनि सक्नुहुन्छ धेरै अग्लो नहुने फर्निचरको आयताकार टुक्रा छान्नुहोस्। आज यी सबै मोड्युलर फर्नीचरको लागि धन्यवाद, हामी तिनीहरूलाई समस्या बिना फेला पार्नेछौं। यो एक उत्तम विकल्प हो ताकि तपाईं आफ्नो सबै पुस्तकहरू राम्रोसँग व्यवस्थित गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसोभए, तपाईं सुत्न नसक्ने रातहरूमा, ती छापिएका रोमांचहरू मध्ये एकबाट आफूलाई टाढा लैजानुमा कुनै चोट लाग्दैन। यो तपाईंको कल्पनालाई जंगली चलाउन दिने उत्तम तरिकाहरू मध्ये एक हो। अब तपाईंले केवल अलमारीहरू भएका फर्निचरहरू छनौट गर्नुपर्दछ र ती पुस्तकहरूका अतिरिक्त, तपाईंले आफ्ना साना सामानहरू भण्डारण गर्न जारी राख्नको लागि बक्सहरूको रूपमा सधैं केही सजावटी विवरणहरू राख्न सक्नुहुन्छ।
हो, यो पनि ती विकल्पहरू मध्ये अर्को एक हो जुन पछाडि छोड्न सकिँदैन किनभने निस्सन्देह, हामी यसलाई धेरै फरक सजावटहरूमा देख्नेछौं। तपाईं सधैं एक को लागी जान सक्नुहुन्छ साधारण बेंच, देहाती समाप्त जहाँ काठ सधैं मुख्य हो। तर हामी भन्छौं कि त्यहाँ विकल्पहरू छन्, तपाईंले मनपर्ने धेरै विकल्पहरू फेला पार्नुहुनेछ। किनभने तपाईं यसलाई सिटको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, उदाहरणका लागि जुत्ता लगाउन सक्षम हुन। वा यसको मुनि, केहि टोकरीहरू वा बक्सहरू राख्नुहोस् जुन हामीलाई धेरै मनपर्ने भण्डारणमा शर्त जारी राख्नुहोस्।
दुई स्टूल मा शर्त
यद्यपि यो सत्य हो कि हामी सँधै फर्निचरको पूर्ण टुक्राको विचारलाई उल्लेख गर्छौं, यो सधैं त्यस्तो हुनु हुँदैन। किनकि हामी हातले सजावट पनि गर्न सक्छौं दुई मल, उदाहरण को लागी। यसरी, हामी तिनीहरूलाई ओछ्यानको प्रत्येक छेउमा राख्न सक्छौं र केन्द्रमा होइन। तर तपाईंसँग मात्र अन्तिम शब्द छ! थप रूपमा, मलहरूमा धेरै सहज माथिल्लो भाग हुन सक्छ, किनकि तिनीहरू साधारण बेन्च हुन सक्छन् वा एक प्रकारको आरामदायक कुसनमा समाप्त हुन सक्छन्। तपाईले देख्नु भएको छ, विकल्पहरू यति विविध छन् कि हामी मध्ये प्रत्येकले हाम्रो सजावटको लागि उपयुक्त हुने फेला पार्नेछ। ओछ्यानको खुट्टा सजाउन सबैभन्दा राम्रो के हुनेछ?
लेखको पूर्ण मार्ग: बेजिया » सजावट » फर्नीचर » ओछ्यानको खुट्टा कसरी सजाउन सक्छु
कसरी काम demotivation जोगिन
के तपाईलाई फोटोग्राफी मन पर्छ? यी6प्रदर्शनीहरूको आनन्द लिनुहोस्